फिलिम Lightroom मोबाइल प्रिसेट | Shekou Woman
फिलिम Lightroom मोबाइल प्रिसेट
बस एक क्लिक मा फिलिम-जस्तो फोटो सिर्जनाहाम्रो फिलिम पूर्व निर्धारित संग्रह। फिलिम मा गर्मी ?!
के समावेश गर्नुपर्छ
✓ 8मोबाइल लागि Lightroom प्रिसेट
✓तत्काल डाउनलोड। फाइलहरूमा लाभ तत्काल पहुँच! तपाईँको अर्डर समाप्तिमा, तपाईं डाउनलोड लिंक संग एक पुष्टि इमेल प्राप्त हुनेछ
✓ मुफ्त Lightroom मोबाइल अनुप्रयोग उपयुक्त!तपाईं आवश्यक सबै आफ्नो मोबाइल उपकरण + मुफ्त Lightroom मोबाइल अनुप्रयोग छ! कुनै अनुभव आवश्यक।
तपाईंको पूर्वसेटहरू कसरी स्थापना गर्न:
बस जिप फाइल ट्याप गर्नुहोस् र यसलाई अनजिप हुनेछ।
तपाईंको निःशुल्क Lightroom अनुप्रयोग खोल्नुहोस्। यसको खुला भएपछि, तपाईं DNG / पूर्व निर्धारित फाइलहरू (अर्को चरण) थप्न सक्नुहुन्छ।
एक पूर्व निर्धारित थप्न, (...) सेटिङ अनुप्रयोग शीर्ष-दायाँ कुनामा विकल्प क्लिक गर्नुहोस्।
छनोट add तस्वीरहरु विकल्प।
अर्को स्क्रिनमा, तपाईं आफ्नो DNG / पूर्व निर्धारित फाइलहरू खींच गरिनेछ स्थान चयन गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो फोनमा तिनीहरूलाई सुरक्षित छ भने, छनौट "क्यामेरा रोल देखि"। तपाईं एक क्लाउड भण्डारण विकल्प तिनीहरूलाई सुरक्षित छ भने, छनौट "फाइलहरू"।
को DNG चयन / पूर्व निर्धारित तपाईं आयात गर्न चाहनुहुन्छ फाइलहरू। यो चरण तर सबै भन्दा फोन धेरै फाइलहरू / छविहरू चयन गर्न बाटो, आफ्नो मोबाइल फोन आधारमा एक सानो फरक हुन सक्छ।
नोट:पूर्व निर्धारित फाइलहरू DNG फाइलहरू छन्। जब तपाईं सुरुमा छवि खोल्न, तपाईँले "फाइल लोड गर्न सक्दैन", भन्छन् त्रुटि हुन सक्छ। यो सामान्य हो। जे भए पनि कुना मा चेक मार्क थिच्नुहोस्।
भर्खरै आयात फाइलहरू एक मा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि स्क्रिनको माथिल्लो दाँया कुनामा एक सर्कल भित्र तीन विन्दुलाई मा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँबाट, मेनु देखिन्छ देखि "पूर्व निर्धारित सिर्जना गर्नुहोस्" चयन गर्नुहोस्।
आफ्नो पूर्व निर्धारित नाम दिनुहोस्। हामी (कुराहरू सरल राख्न) पूर्व निर्धारित छविको अगाडि छ भनेर नै नाम टाइप गर्न सुझाव दिन्छौं।
तपाईं पनि एक पूर्व निर्धारित समूह मा पूर्व निर्धारित राख्नु पर्छ। पूर्वनिर्धारित, यो प्रयोगकर्ता प्रिसेट समूह हुनेछ। आफ्नो नयाँ संग्रह नाम संग एउटा नयाँ समूह सिर्जना प्रत्येक संग्रह सँगै देखि पूर्वसेटहरू राख्नेछ।
प्रत्येक DNG / पूर्व निर्धारित फाइल लागि यी नै कदम गर्छन्।
को Lightroom मोबाइल अनुप्रयोग मा छवि चयन कि तपाईंले सम्पादन गर्न चाहन्छ। तपाईं विकल्प "प्रिसेट" र ट्याप हेर्न सम्म तल विकल्पहरू मा बायाँ स्वाइप गर्नुहोस्। यो तपाइँको सबैभन्दा हालै प्रयोग लेन्ससुधार संग खुल्नेछ। संग्रह नाम छोएर, तपाईंले भर्खरै स्थापित नयाँ संग्रह चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
के तपाईं चाहनुहुन्छ एक नभेट्टाएसम्म पूर्वसेटहरू मार्फत क्लिक गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो पूर्व निर्धारित थप्दा सिध्याएपछि, तल्लो दायाँ कुनामा चेक मार्क क्लिक गर्नुहोस्।